Philippe Coutinho Oo Ku Soo Laabanaya Anfield-Sidee? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Philippe Coutinho Oo Ku Soo Laabanaya Anfield-Sidee?
(14-2-2018) Wararka ka imaanaya gobolka Merseyside ee dalka England ayaa sheegaya in garoonka Anfield ee kooxda Liverpool uu marti galin doono bisha kulan saaxiibtinimo oo Brazil iyo Croatia ay wada ciyaai doonaan.
Kulanka oo sida laga soo xigat Liverpool Echo la ciyaari doono sadexda bisha June ayaa la sheegay in ciyaariyahan Philippe lagu arki doono markale Anfield kadib markii dhawaan heshiis qaali ah ugu biiray Barcelona.
Jaraa’idka Liverpool Echo, oo soo xiganaya ilo ku sugan Croatia ayaa daabacy in kulanka lagu waday in lagu ciyaaro garoonka Staform Bridge ee kooxda Chelsea laakiin ciyaariyahan Van Dijk ayaa la sheegay in uu u ololeeyay sidii kulankaasi loogu qaban lahaa Anfield.
Kulankaas ayaa iska hor keeni doona ciyaartooy kawada tirsan kooxda Liverpool waxaana iskaga hor imaan doona Roberto Firmino Dejarn Lovern oo kawada ciyaara Liverpool.